Khadiijo M. Diiriye “Guddoomiye Muudey isagaa ayaa leh guddoominta iyo hoggaaminta golaha…” | Baydhabo Online
Khadiijo M. Diiriye “Guddoomiye Muudey isagaa ayaa leh guddoominta iyo hoggaaminta golaha…”
Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye, kana mid ah Xildhibaanada hormuudka ka ah Mooshinka ka dhanka ah Guddoomiye Jawaari ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedeyn ka soo yeeray Xildhibaano, kaasoo ahaa in Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Ibraahim Muudey in aanu dhex dhexaad ka aheyn mooshinka.
Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in eedeynta Xildhibaanadaas uu yahay marin habaabin, iyadoo xustay in Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Muudey uu leeyahay hoggaaminta iyo guddoominta golaha, maadaama uu mooshin ka yaallo Guddoomiye Jawaari.
“Xeer Hoosaadka qodobka 8aad farqadiisa 1aad Guddoomiyaha Golaha Shacabka marka uu maqan yahay ama uusan qaban karin xilkiisa, sabab kasta ha ahaatee, waxaa dhammaan howshiisii fulinaya Guddoomiye kuxigeenka koowaad, hadii uusan dalka ka maqneyn”ayay tiri Khadiijo Maxamed Diiriye oo difaacday Guddoomiye Muudey.
Waxaa ay sheegtay in Guddoomiye Muudey uu qabtay mooshinkii laga keenay Guddoomiye Jawaari, sidaas uu ku noqonayo ninka hoggaaminaya kulamada, iyo qaabka loo marayo maareynta Mooshinka.
“Qodobada qaarkood waa marin habaabin, ma quseeyo maareynta mooshinka, xeer hoosaadka ayaa si cad u qeexay”ayay yiri Khadiijo Maxamed Diiriye.
Xildhibaano la magac baxay Badbaadada Baarlamaanka oo shalay ku shiray magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay Guddoomiye Muudey in aanu dhex dhexaad ka aheyn mooshinka Jawaari, isla markaana la helo qof dhex dhexaad ka ah mooshinka oo shir guddoomiya kulanka looga doodayo mooshinka.